Amniga Magaalada Gaalkacyo oo aad loo Adkeeyay – Radio Daljir
Nofeembar 24, 2015 1:50 b 0
Somalia, November 24, 2015 (Daljir) â€” Xaalada magalada Gaalkacyo xarunta Gobalka Mudug ayaa degan maalintii labaad ka dib dagaal waddo la dhisayo ka bilowday oo dhexmaray maleeshiyo Galmudug kasoo jeeda iyo ciidanka Puntland.
Dagaalkaasi ayaa sababay dhimashada todobo qof iyo dhaawac intaasi ka badan, waxana hadda socda weli waanwaanta lagu dhamaynayo colaadaasi iyo in mar kale uusan dagaal bilaaban.
Odayaal iyo waxgarad kasoo jeeda Puntland ayaa wada hadal labo maalmood ku eg la qaadanaya dhinaca Galmudug, si loosoo afjaro xiisada weli ka muuqata goobtii dagaalku ka bilowda ee Garsoon.
Dadka waxgaradka ah ee ku nool magalada Gaalkacyo ayaa la hadlay warbaahinta, waxay sheegeen inaysan faaâ€™iido lahayn dagaal iyo colaad labadana dhinaca ay dantu ugu jirto inay ka shaqeeyaan xasiloonida iyo wada noolaashaha.
Amniga Gaalkacyo ayaa si aad ah loo adkeeyay maalmahan